I-UNIGLOBE iyanda eYurophu ngokufakwa kweCorporate Travel Bulgaria
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zeBulgaria Breaking » I-UNIGLOBE iyanda eYurophu ngokufakwa kweCorporate Travel Bulgaria
Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zeBulgaria Breaking • ICanada Breaking News • Izindaba • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
I-UNIGLOBE Corporate Travel Bulgaria uyilungu elisha kunawo wonke lenethiwekhi ye-UNIGLOBE Travel Global Partner eYurophu.
I-UNIGLOBE Corporate Travel Bulgaria, ezinze eSofia, iyinkampani ekhula ngokushesha ekuphathweni kohambo egxile ekusebenzeleni amabhizinisi ezinkampani. Umqondisi ophethe uThomas Stoitschew, “Ngokubambisana ne-UNIGLOBE, umbono wethu ukuba nguzakwethu othembekile kumakhasimende ethu eBulgaria. Silangazelela ukuhlinzeka ngobuchwepheshe basendaweni kumakhasimende e-UNIGLOBE eBulgaria nasemhlabeni jikelele. ”
Uhlelo lwe-UNIGLOBE Global Partner luvulekele izinkampani ezisebenza kahle kakhulu zokuhamba ezifuna ukwandisa amanethiwekhi nobuchwepheshe bazo ezimakethe zomhlaba wonke. Lolu hlelo lubuye lunikeze ama-ejensi e-UNIGLOBE emhlabeni wonke ukufinyelela kubuchwepheshe bendawo kanye nensizakalo lapho kuhlelwa izinhlelo zokuhamba zamakhasimende ezamabhizinisi nezokungcebeleka.
"IBulgaria imakethe ebalulekile ye-UNIGLOBE," kusho umsunguli we-UNIGLOBE futhi oyisikhulu esiphezulu U. Gary Charlwood. “Iyimakethe ethuthuka ngokushesha yezinkampani zomhlaba wonke futhi iyindawo efiselekayo yemicimbi eYurophu. Siyajabula ukwamukela umlingani wethu omusha, i-UNIGLOBE Corporate Travel Bulgaria, futhi sengeza le makethe echumayo kwinethiwekhi yethu yomhlaba wonke. ”
Ukusebenza emhlabeni wonke ukusebenzela amaklayenti endawo emazweni angaphezu kwama-60, I-UNIGLOBE Travel International ihlanganisa ubuchwepheshe bamanje nezintengo zabaphakeli ezincanyelwayo ukonga isikhathi namali kumakhasimende ezinsizeni zebhizinisi nezokungcebeleka. Kusukela ngo-1981, abahambi bezinkampani nezokungcebeleka bathembele kumkhiqizo we-UNIGLOBE ukuletha izinsizakalo ngaphezu kokulindelekile. I-UNIGLOBE Travel yasungulwa ngu-U. Gary Charlwood, oyi-CEO futhi inekomkhulu layo lomhlaba eVancouver, BC, Canada. Ivolumu yonyaka yokuthengisa ebanzi yohlelo ingu- $ 5.0 + billion.
Mayelana ne-UNIGLOBE Corporate Travel Bulgaria
I-UNIGLOBE Corporate Travel Bulgaria Ltd. inikeza izinkonzo eziningi zokuhamba ngokugxila kakhulu emisebenzini emihle, ubuchwepheshe obusha, nokuthola ubuciko, ukuze kuzuze amakhasimende ayo ezinkampani. Izinqubo nobuchwepheshe be-UNIGLOBE Corporate Travel buguqulwa ngokwezidingo zamakhasimende ezihlukile futhi kuhloswe ngazo ukudala izinhlelo nezinsizakalo ezenziwe ngezifiso.